पहिलो अन्तिम हुनुपर्छ - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
मिडिया > जर्नल उत्तराधिकार > पत्रिका उत्तराधिकारी 2018-02 > पहिलो अन्तिम हुनुपर्दछ
पहिलो अन्तिम हुनु पर्छ!
जब हामी बाइबल पढ्छौं, हामी येशूले भन्नुभएको सबै कुरा बुझ्न संघर्ष गर्छौं। मत्तीको सुसमाचारमा पुनरावर्ती कथन फेला पार्न सकिन्छ: "तर धेरै जो पहिले छन् अन्तिम हुनेछन् र अन्तिमहरू पहिलो हुनेछन्" (मत्ती 19,30)।
येशूले स्पष्ट रूपमा समाजको व्यवस्थालाई खलबल्याउन, यथास्थिति समाप्त गर्न र विवादास्पद बयान गर्न बारम्बार प्रयास गर्नुभयो। प्यालेस्टाइनमा प्रथम शताब्दीका यहूदीहरू बाइबलसँग धेरै परिचित थिए। हुनसक्छ विद्यार्थीहरू येशूसँगको उनीहरूको भिडन्तबाट फर्किए, अलमल्ल र रिसाए। तर येशूका शब्दहरू उनीहरूसँग मेल खाएनन्। त्यस समयका रब्बीहरूलाई उनीहरूको धनसम्पत्तिको लागि राम्रो सम्मान थियो जसलाई भगवानले आशिष्‌ ठान्थे। यी सामाजिक र धार्मिक सीढीमा "पहिलो" थिए।
अर्को अवसरमा येशूले आफ्ना श्रोताहरूलाई यसो भन्नुभयो: “तिमीहरूले अब्राहाम, इसहाक र याकूब र सबै अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा देख्दा रुने र दाँत किट्ने हुनेछ, तर जब तपाईं आफैलाई बाहिर देख्नुहुन्छ! अनि तिनीहरू पूर्व र पश्चिम, उत्तर र दक्षिणबाट आउनेछन्, र परमेश्वरको राज्यमा टेबुलमा बस्नेछन्। अनि हेर, तिनीहरू अन्तिम छन्, तिनीहरू पहिलो हुनेछन्। र यो पहिलो हो जो अन्तिम हुनेछ » (लूका 13, 28-30 श्लाचर बाइबल)।
मरियम, येशुकी आमा, पवित्र आत्माबाट प्रेरित भएर, आफ्नी भाइ एलिजाबेथलाई यसो भनिन्: “उहाँले बलियो हातले आफ्नो शक्ति देखाउनुभयो; उहाँले हावामा ती मानिसहरु जसको स्वभाव गर्व र घमण्डी छ छरिएको छ। उहाँले शक्तिशालीहरुलाई तिनीहरुको सिंहासन बाट उखालेर तल उठाउनुभएको छ (लूका १: ५१-५२, नयाँ जेनेभा अनुवाद)। सायद यहाँ एउटा सङ्केत छ कि घमण्ड पापको सूचीमा छ र परमेश्वर घृणित हुनुहुन्छ (हितोपदेश ६:१६-१९)।
चर्च को पहिलो शताब्दी मा, प्रेरित पावल यो उल्टो क्रम पुष्टि। सामाजिक, राजनीतिक र धार्मिक सर्तहरूमा, पावल "पहिलो" मध्ये एक थिए। उहाँ एक रोमन नागरिक हुनुहुन्थ्यो जसलाई बलियो अभिभावक भएको सुअवसर थियो। "जसको आठौं दिनमा खतना गरिएको थियो, इस्राएलका मानिसहरू, बेन्जामिनको कुलको, हिब्रूहरूको हिब्रू, व्यवस्थाद्वारा एक फरिसी" (फिलिप्पी 3,5)।
पावललाई ख्रीष्टको सेवामा बोलाइएको थियो जब अन्य प्रेरितहरू अनुभवी प्रचारकहरू थिए। उहाँ कोरिन्थीहरुलाई लेख्नुहुन्छ र अगमवक्ता यशैया को उद्धरण दिनुभयो: «म बुद्धिमान को ज्ञान लाई नष्ट गर्न चाहन्छु, र म समझ को समझ लाई अस्वीकार गर्न चाहन्छु ... तर संसार को अगाडि मूर्ख के हो, कि भगवानले चुन्नु भएको छ बुद्धिमानीहरूलाई लाजमा पार्न सक्छ; र के दुनियाँमा कमजोर छ, कि भगवानले बलियो कुरालाई शर्ममा राख्न छनौट गर्नुभयो (१ कोरिन्थी १: १ 1 र २ 1,19)।
पावलले ती मानिसहरूलाई भने कि पुनरुत्थान हुनुभएको ख्रीष्ट उहाँ पछि देखा पर्नुभयो "अन्तिम समय असामयिक जन्म" पछि अर्को एउटा अवसरमा 500०० भाइ, त्यसपछि याकूब र सबै प्रेरितहरूसामु देखा पर्नुभयो। अर्को सुराग? के कमजोर र मूर्खले ज्ञानी र कडालाई लाज पार्छ?
इस्रायलको इतिहासको क्रममा परमेश्वरले प्राय: सीधा हस्तक्षेप गर्नुभयो र अपेक्षित क्रमलाई उल्टाउनुभयो। एसाव जेठो छोरो थियो, तर याकूबले अधिकारको अधिकार पायो। इश्माएल अब्राहमका जेठा छोरा थिए, तर इसहाकको जन्मसिद्ध अधिकार दिइयो। जब याकूबले यूसुफका दुई छोरालाई आशीर्वाद दिए, उनले आफ्नो छोरो कम्ती छोरा एफ्राइममा राखे मनश्शेलाई होइन। इस्राएलको पहिलो राजा शाऊलले मानिसहरूमाथि शासन गर्दा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न सकेनन्‌। परमेश्वरले यिशैका छोरा दाऊदलाई छान्नुभयो। दाऊद बाहिर मैदानमा भेडाको हेरचाह गरिरहेका थिए र उनलाई अभिषेक गर्नलाई बोलाउनु परेको थियो। कान्छोको रूपमा, उनी यस पदका लागि योग्य उम्मेदवार मानिएनन्। यहाँ पनि, अरु सबै महत्त्वपूर्ण भाइहरू भन्दा पहिले "परमेश्वरको आफ्नै हृदयको पछि मानिस" चुनिएको थियो।
व्यवस्थाका शिक्षकहरू र फरिसीहरूबारे येशूसँग धेरै कुराहरू थिए। मत्तीको सुसमाचारको अध्याय 23 को लगभग सबै तिनीहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ। तिनीहरूले सभाघरमा सबैभन्दा राम्रो सिटहरू मन पराउँथे, तिनीहरू बजारहरूमा अभिवादन गर्न पाउँदा खुसी थिए, मानिसहरूले तिनीहरूलाई रब्बी भन्थे। उनीहरुले जनताको अनुमोदनको लागी सबै काम गरे। चाँडै ठूलो परिवर्तन हुनुपर्छ। «जेरुसलेम, यरूशलेम ... मँ कती पटक तिम्रो बच्चाहरुलाई एक साथ जम्मा गर्न चाहन्थें एक कुकुरले आफ्नो पखेटा मुनि आफ्नो बच्चाहरु लाई जम्मा गरे जस्तै; र तपाईं चाहनु हुन्न! तिम्रो घर उजाड हुनेछ" (मत्ती २३:३७-३८)।
यसको अर्थ के हो: "उसले वीरलाई तल खसाल्दै छ र नम्रहरूलाई माथि उठाउँछ?" हामीले परमेश्वरबाट जेसुकै आशिष्‌ र उपहार पाएका छौं, हामी आफैले घमन्ड गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन! घमण्डले शैतानको पतनको सुरुवातलाई चिह्न लगायो र हामी मानवहरूको लागि घातक छ। जतिसक्दो चाँडो ऊ हामी माथि पक्रन्छ, त्यसले हाम्रो सम्पूर्ण दृष्टिकोण र दृष्टिकोण परिवर्तन गर्दछ।
उहाँको कुरा सुने फरिसीहरूले येशूलाई दुष्ट राजकुमार बेलजेबबको नाममा भूतहरू भगाएको आरोप लगाए। येशूले एउटा चाखलाग्दो कथन गर्नुहुन्छ: “अनि जसले मानिसको पुत्रको विरुद्धमा केही बोल्छ, त्यसलाई क्षमा गरिनेछ। तर जसले पवित्र आत्माको विरुद्धमा केही बोल्छ, त्यसलाई न त यस संसारमा न त आउने संसारमा क्षमा गरिनेछ” (मत्ती १२:३२)।
यो फरिसीहरूको बिरूद्ध अन्तिम फैसला जस्तो देखिन्छ। तिनीहरूले धेरै चमत्कारहरू देखे। तिनीहरू येशूबाट टाढा भए, उहाँ सत्यवादी र चमत्कारी हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो रिसोर्टको एक प्रकारको रूपमा, तिनीहरूले उहाँलाई एउटा संकेत मागे। के यो पवित्र आत्माको विरुद्ध पाप थियो? के तिनीहरूका लागि क्षमा अझै सम्भव छ? उनको गर्व र उनको कठोर हृदयको बावजुद, उनले येशूलाई माया गर्छिन् र तपाईं फिर्ता आउन चाहान्छिन्।
सधैं जस्तै, त्यहाँ अपवाद थिए। निकोदेमस रातमा येशूकहाँ आए, अझ धेरै बुझ्न चाहन्थे, तर महासभा, महासभादेखि डराए (यूहन्ना ३:१)। पछि येशूको शरीरलाई चिहानमा राख्दा उनले अरिमिथियाका जोसेफलाई साथ दिए। गमलिएलले फरिसीहरूलाई प्रेरितहरूको प्रचारको विरोध नगर्न चेतावनी दिए (प्रेरित ५:३४)।
राज्यबाट बाहिर छ?
प्रकाश २०:११ मा हामी एक महान् सेतो सिंहासन अघि न्यायको पढ्छौं, र येशूले "बाँकी मरेकाहरूको" न्याय गर्नुहुनेछ। हुनसक्छ ती इस्रायलका यी प्रख्यात शिक्षकहरू, त्यस समयमा तिनीहरूको समाजको "पहिलो", अन्तमा, जसलाई उनीहरूले क्रूसमा टाँगेका थिए येशू वास्तवमै उहाँ को हुनुहुन्थ्यो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो? यो धेरै राम्रो "चिन्ह" हो!
एकै समयमा, तिनीहरू आफैं राज्यबाट बहिष्कृत छन्। तपाईंले पूर्व र पश्चिमका मानिसहरूलाई देख्नुहुन्छ जसलाई तिनीहरूले तल हेरेका थिए। धर्मशास्त्र जान्‍ने फाइदा कहिल्यै नपुगेका मानिसहरू अहिले परमेश्‍वरको राज्यको महान् भोजमा टेबुलमा बसिरहेका छन् (लूका १३:२९)। यो भन्दा अपमानजनक के हुन सक्छ?
इजकिएल ३७ मा प्रसिद्ध "मृत हड्डीहरूको क्षेत्र" छ। परमेश्वरले अगमवक्तालाई डरलाग्दो दर्शन दिनुहुन्छ। सुक्खा हड्डीहरू "रट्टिंग शोर" संग जम्मा हुन्छन् र मान्छे बन्छन्। परमेश्वरले भविष्यवक्तालाई भन्नुहुन्छ कि यी हड्डीहरू इस्राएलको सम्पूर्ण घराना हुन् (फरिसीहरू सहित)।
तिनीहरू भन्छन्: "हे मानिस, यी हड्डीहरू इस्राएलको सम्पूर्ण घराना हुन्। हेर, अब तिनीहरू भन्छन्: हाम्रा हड्डीहरू सुकेका छन्, र हाम्रो आशा हराएको छ, र हामी समाप्त भएका छौं" (इजकिएल 37,11:37,12)। तर परमेश्‍वर भन्‍नुहुन्छ: “हेर, म तिमीहरूका चिहानहरू खोलिदिनेछु, र म तिमीहरूलाई, मेरा मानिसहरूलाई तिमीहरूका चिहानहरूबाट निकालेर इस्राएलको भूमिमा ल्याउनेछु। अनि तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ कि म परमप्रभु हुँ जब म तिमीहरूका चिहानहरू खोल्छु र तिमीहरूलाई, मेरा मानिसहरूलाई तिमीहरूको चिहानबाट बाहिर ल्याउँछु। अनि म तिमीमा मेरो सास दिन चाहन्छु, कि तिमी फेरि बाँच्न चाहन्छु, र म तिम्रो देशमा बस्न चाहन्छु, र तिमीले म परमप्रभु हुँ भनी जान्न चाहन्छु" (इजकिएल ३७:१२-१४)।
किन परमेश्वरले सबैभन्दा अन्तिम हुनेहरूलाई अन्तिम स्थानमा राख्नुहुन्छ र किन अन्तिम हुनुहुन्छ? हामी जान्दछौं कि भगवानले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ - पहिलो, अन्तिम जस्तो, र सबै बीचको। उहाँ हामी सबैको साथ सम्बन्ध चाहनुहुन्छ। पश्चातापको अनमोल उपहार केवल नम्रतापूर्वक परमेश्वरको अद्भुत अनुग्रह र सिद्ध इच्छालाई स्वीकार्नेहरूलाई दिन सकिन्छ।
Hilary Jacobs द्वारा